China menduru fekitori uye vagadziri | Kingtai
Kubudirira chaiko kunofanirwa kupihwa kuzivikanwa kwavanokodzera. Yedu yepamusoro mhando bespoke enamel menduru dzinotaura zvakati wandei kupfuura iwo huwandu hwakagadzirwa, kubva pasherufu dzimwe nzira.
Wedzera yako dhizaini, yakateerana kuverenga uye yekuyeuchidza zvinyorwa kumenduru kuti uve nechokwadi chekuti yega yega inoramba iri yakasarudzika uye yakakosha chipo.
Inowanikwa mune chero chimiro, saizi kana dhizaini ine yakasarudzika chiuno kugadzirisa kune yemutsipa ribhoni, uye goridhe, sirivheri uye bronze kupera.
Menduru idzi dzakakwana kune "akacheka-akacheka" mavara mavara kana magadzirirwo ane hupamhi. Inogona kushandiswa mukusimudzira kambani, mutambo uye kushandiswa sechipo chechirangaridzo cheshamwari, icho chinoratidza kukosha kwakanakisa kwekuzivikanwa kwemufananidzo.
Zvimwezve zvekusimudzira sarudzo zvinogona zvakare kusanganisira kuwedzera inopenya yakapfava enamel, pepa chinamirwa, kudhinda kwedhijitari, kupenda uye epoxy.
Zinc alloy medals inopa zvisingaite dhizaini kuchinjika nekuda kweiyo jekiseni kuumbwa maitiro, nepo izvo zvinyorwa zvacho zvakaomarara zvakanyanya zvichipa aya menduru kupera kwemhando. Sezvo nemamayera enamel akajairwa, idzi zinc alloy dzimwe nzira dzinogona kusanganisira anosvika mana mavara enamel uye anogona kuumbwa kune chero chimiro.
Isu tinoitawo mamwe mabasa kunatsiridza nekushongedza menduru. Nechinangwa ichi, tinovaisa pasi peiyo oxidation kana patination kuti vaonekwe sevakuru.
Nguva yekugadzira: 10-15 mazuva ebhizinesi mushure mekubvumidzwa kwehunyanzvi.
SOFT ENAMEL MAEDHALI
Nyoro enamel menduru inomiririra yedu yakawanda yehupfumi enamel medal. Ivo vanogadzirwa kubva yakadhinda simbi kana simbi ine yakapfava enamel kuzadza uye inosanganisira epoxy resin yekumhara, iyo inodzivirira menduru kubva mukukwaya uye inopa kumeso kupera.
Yako tsika dhizaini inogona kusanganisira anosvika mana mavara uye inogona kuiswa chidhindo kune chero chimiro pamwe nesarudzo dzegoridhe, sirivheri, bronze kana nhema nhema nickel kupera. Minimum yekuraira huwandu i50 pcs.
HARD ENAMEL MAEDHALI
Iyi menduru dzakadhindwa dzakazadzwa neyakagadzirwa vitreous yakaoma enamel, ichivapa hurefu hwusingapfuure. Kusiyana nyoro enamel menduru, hapana epoxy kupfeka inodiwa, saka iyo enamel inoyerera pamusoro pesimbi.
Yako tsika dhizaini inogona kusanganisira anosvika mana mavara uye inogona kuiswa chidhindo kune chero chimiro pamwe nesarudzo dzegoridhe, sirivheri, bronze kana nhema nhema nickel kupera. Minimum yekuraira huwandu ingori makumi maviri nemashanu pcs.
ZINC ALLOY MAEDHALI
Zinc alloy medals inopa zvisingaite dhizaini kuchinjika nekuda kweiyo jekiseni kuumbwa maitiro, nepo izvo zvinhu pachazvo zvakanyanyisa kusimba zvichipa aya menduru kupera kwemhando yepamusoro.
Chikamu chakakura chema enamel menduru ane mativi-maviri, zvisinei kana dhizaini ichida matatu-mativi kana akawanda akaturikidzana maviri-eiri basa, zvino maitiro aya anouya mune ake.
Sezvo nemamayera enamel akajairwa, idzi zinc alloy dzimwe nzira dzinogona kusanganisira anosvika mana enamel mavara uye anogona kuumbwa kune chero chimiro. Minimum yekuraira huwandu i50 pcs.
Pashure: Krisimasi bhero uye chishongo
3d Brass Menduru
Mubayiro Wesimbi Menduru
Yakachipa Sport Menduru
China Sport Menduru
Mabhuku eBraille Brass Medal